दुलाल - विकिपिडिया
दुलाल नेपाल, भारत ,बर्मा तथा अन्य स्थानहरूमा बसोबास गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बी विशेषतया नेपालीहरूको थर हो। दैलेख जिल्लाको दुल्लु क्षेत्रबाट उद्गम भएका दुलालहरू नेपाल तथा भारतको अधिकांश भुभागमा बसोवास गर्दछन्।
३ भेषभुषा र भाषा
६ दुलालहरूले मान्ने विशेष पर्वहरू
७ दुलाल बंश
७.१ ऐतिहासिक थाकथलो र पृष्टभूमी:-
७.२ दुलालथरको उत्पत्ति र विकासबारे
दैलेखको दुल्लु उद्गम क्षेत्र भएका दुलालहरूको पूर्वको रूपमा आत्रेय ऋषिलाई मानिन्छ। हाल दुलालबन्धु समाज नेपालले दुलालहरूको पहिचानको लागि वंशज सम्बन्धि अनुसन्धनात्मक वंशवृक्ष पुस्तक प्रकाशन गरिसकेको अवस्था रहेको छ । यस सन्दर्भमा थप अध्ययन र अनुसन्धान भैरहेको र भविष्यमा थप गरिने छ ।
नेपालमा बसोबास गरिरहेका अधिकांश दुलालहरु हिन्दु धर्म मान्नेहरु रहेका छन् ।
भेषभुषा र भाषा[सम्पादन गर्ने]
हिन्दु धर्म मान्ने दुलालहरूको भेषभुषा साधारण अन्य नेपालीहरूको जस्तै रहेको पाईन्छ । पाको उमेरका दुलालहरूले कमिज/सुरवाल, दौरा/सुरवाल, ईष्टकोट र ढाका टोपी लगाउन छन भने महिलाहरू धोती चोलो ब्लाउज लगाउने गरेको पाइन्छ । ब्राम्हण जाती अन्तरगत पर्ने भएकोले पुरुष दुलालहरूले पुजाआजामा सेतो रङ्गको धोती र कमिज लगाउने चलन छ भने महिलाहरूले रातो रङ्गको कपडाहरु लगाउने गर्दछन् । दुलालहरूको आफ्नो जाति विशेष पोशाक छैन् । भाषाको रूपमा खस नै दुलालहरूको मातृभाषा रहेको पाईन्छ ।
दुलालवंशावली पुस्तकलाई आधारमानि यस सम्बन्धि विवरण उपलब्ध गराईने छ ।
हालसम्म भएको जानकारी अनुसार काठमाण्डौ उपत्यका र त्यसको आसपासका ग्रामिण क्षेत्रहरूमा दुलालहरूको बसोबास रहेको छ । काठमाण्डौको बुढानिलकण्ठ, झोर महाँकाल, भक्तपुरको सुडाल,भङगाल, र अन्य केही स्थानहरूमा दुलालहरु रहेका छन् ।ललितपुर जिल्लाको गोटिखेल,चन्दनपुर,कालेश्वर,ठुलादुर्लुङ,गिम्दी,भट्टेडाँडा,चापागाउँ,त्यसैगरि काभ्रे जिल्लाको देउपुर,पाँचखाल दुलालथोक,नाला, भकुण्डेबेसि, ढुङखर्क, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, ठुलोसिरुवारी अर्चले, सानोसिरुवारी पौवा,ईन्द्रावति गा.पा.बडहरे , जल्बिरे, मेलम्ची, भवरकोट क्षेत्र ,मकवानपुरको हेटौंडा , पदमपोखरी,चौघडा पुतलीबजार ,सामरी, हटिया चिसापानी ,चितवन , धादिङ , सिन्धुली, तथा नुवाकोटको विभिन्न स्थानमा [बेलकोटगढी नगरपालिका ] पनि दुलालहरूको बस्ती रहेको छ । दोलखाको चरिकोट आसपासका क्षेत्र, पूर्वमा मोरङ, महोत्तरी तथा झापा, ईलाम सम्म दुलालहरूको बसोबास रहेको छ ।
साथै भारतको सिकिम , आसाम , मडिपुर , बर्मा (म्यानमार) , अमेरीका , बेलायत , भुटान लगायत अन्तर्राष्ट्रिय देशमा पनि दुलाल बन्धुको बसोबास रहेको छ ।
दुलालहरूले मान्ने विशेष पर्वहरू[सम्पादन गर्ने]
नेपालमा बसोबास गरिरहेका दुलालहरु हिन्दु भएकोले हिन्दु धर्ममा मानिने सम्पूर्ण चाँडपर्वहरु दुलालहरूले पनि मनाउने गर्दछन् । विशेष गरी दशै, तिहार, कृष्ण अष्टमी, एकादशी, शिवरात्री, फागुपूर्णिमा, तिज जस्ता हिन्दुधर्मका चाडबाडहरु विशेष रूपले मनाउने गरिन्छ भने कुलदेवता तथा बायुदेवताको पुजा समुदायमा मनाउने प्रचलन रहेको छ ।
कुलको तथा बायुको देवतालाई भनी देवाली पुजा अनि अर्को पुजामा गोठकोपुजा अर्थात गोठधुप पनि गरिछ
दुलाल बंश[सम्पादन गर्ने]
नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा छरपष्ट रहेका दुलाल बन्धुहरूलाई संकलित र संगठित बनाउदै एक सुत्रमा गाँस्नु अति आवश्यक थियो । यसकालागि अथक मेहनतका साथ आज यो वंशावली प्रकाशनको अवस्थामा हामी पुगेका छौ । वंशावलीमा हुनैपर्ने विषयवस्तु क्रमबद्ध नहुन सक्दछन् । तथापि यो प्रथम प्रयासमा देखिएका र भेटिएका तथ्यहरु समावश गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
ऐतिहासिक थाकथलो र पृष्टभूमी:-[सम्पादन गर्ने]
दुलालको मुल थाकथलो र एैतिहासिकता बारे खासै बिवाद देखिदैन । अत्रि ऋषिका उत्तरवर्ती दरसन्तान नै आत्रेय गोत्री आजका दुलाल हुन् भन्दा यसको सरल जवाफ हुन्छ । त्यति भनेर मात्रै पनि पुगने । अब मुल थलो कहाँ हो भन्ने थाहा पाउन पर्यो । यसरी हेर्दा दैलेख जिल्लाको दुल्लु उपत्यका नै आत्रेय गोत्री दुलालको मूलथद्यो हो । दुल्लुमा बसोबास गर्ने आत्रेय गोत्रीहरु नै कालान्तरमा आएर दुलाल भए ? आत्रेय गोत्री भएका अरु थर पनि छन्? तिनको बारेमा उनकै वंशावलीले प्रष्ट पार्नेछ । नेपालका धेरै थरहरु दैलेको दुल्लु बाटै रहेको पाईन्छ । संस्कृत भाषाको स्थल शब्दबाट थलो, ठहर, ठाँउ हुँदै थर हुनआएको हो । मान्छे जुन ठाउँमा बसोबास गर्यो त्यसै ठाउँसँग जोडिएर उसको थरबन्दै गयो । यसरी नै दैलेखका हाम्रा आदिपूर्खाह दुल्लुवाल दोलाल हुदै दुलाल कहलिए । दुलाल थरमा रुपान्तरण भए । हो आजका हामी आत्रेय गोत्री समस्त दुलालको मूलथलो दैलेखको दुल्लु नै हो । यसैलाई मानौ । ऐतिहासिक पृष्टभूमी खोज्दै जाँदा हामी उनै अत्री ऋषिमा पुगेर ठोकिन्छौ । यो एक अनुमान परक मत हो । यस भन्दा छुट्टै मत राख्यौ भने हामी अल्मलिन्छौ । यसर्थ यो मतलाई पनि सहि ठानेर बस्नु पर्यो । मानौ नेपालमा रहेको विभिन्न थरको इतिहासको अध्ययन गर्दा अछामी र सिङडी सबै भन्दा पुराना थर हुन् । सम्बत १४०६को पृथ्वी मलको बाजुरा अभिलेखबाट यसको पुष्टी हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा थरको विकास भएको आठसय वर्ष पुग्दैछ ।
दुलालथरको उत्पत्ति र विकासबारे[सम्पादन गर्ने]
दैलेख दुल्लुका चन्द्रवंशी शाह आत्रेय गोत्री दुलाल हुन् । यस्तै अछाम,गोताम, सल्यान, माल्टेना, छलि, जाजरकोटका चन्द्रवंशि शाह, शाहि पनि आत्रेय गोत्रि हुन् । रुकुम, मुशिकोट, बाझि, दर्ना, शान्नी, धुनि, फलावाङ्ग र धुलिकोटका शाह, शाहि, चन्दहरु पनि आत्रेय गोत्रि रहेका छन् । उनीहरू दुलालको सहगोत्री बन्धु हुन् । दुवाडी, पाशुपत, भट्ट पनि आत्रेय गोत्री नै हुन् । उनीहरूसँग दुलालका प्रवर पनि एउटै हुन्छ । अर्थात आत्रेय, अर्चनानश, श्यावाश्य साझा प्रवर हो । यसो भन्नुको अर्ठ्ठ हाम्रा मूल पुर्खा एकै हुन् । यसरी हेर्दा वत्सराज भट्ट (वि.स.११२७ मा)कुमाउको पिथौरागडमा जन्म भएको र यिनी डोटीका राजा भएको अभिलेख पाईन्छ । वत्सराजका पाँचभाइ छोरा मध्ये जेठा कालु बर्मा शाही ठकुरीहरु माइला च्यावन भट्टका नाती नारायणदाश अर्याल भए । साँइला काशिराज भट्ट पानी पोख्रेल भए काइला उत्सव राज भट्टको जन्म ११६० को कान्छा कन्थराज भट्ट हाम्रा मूल पुर्खा उत्शवराज भट्टका छोरा १ मात्र वि.सं. ११८५ को हो । उनका पनि छोरा पाँचभाइ हुन जेठा श्री कृष्ण भट्ट, सिक्देल भए माइला शाहवंशी ठकुरी भए । साईला कालु थापा जन्म (१२४६) डोटीका राजा भए । यिनी बगाले थापाका पुर्खा हुन् । काइला प्रज्वल थापा मल्ल ठकुरी नै हुन पुगे । कान्छा श्री देव (वि.सं.१२१५) को जन्म यिनका पनि पाँच भाइ नै हुन् । जसमा जेठा गुणदेव (वि.स.१२३२) तिर जन्म दुलाल थरका मुल पुरुष भए । माइला श्रीनन्द पौडेल भए । साइला श्रीनाथ दुवाडी थरका भए । काइला प्रभुदत्त बाजपियका पुर्खा भए । कान्छा कृष्ण दत्त अगस्तीका पुर्खा, उनै श्री देवका छोरा जेठा गुणदेव नै आजका समस्त आत्रेय गोत्री दुलालको आधुनिक मूल पुर्खा हुन् । उनैबाट फैलिएका वंशवृक्ष आजका समस्त आत्रेय गोत्री दुला हौं । दैलेको दुल्लु हाम्रो आदि थलो हो भने आधुनिक थाकथलो भने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको देउपुर हो । त्यही थलोबाट दुलालहरु फैलिदै पूर्वका गाउँ वस्तीतिर विस्तार भए । सुदुरपूर्वको ताप्लेजुङ्ग सम्म पुगे, धनकुटा, तेर्हथुम, पाँचथर, इलाम तिर फैलिए । मध्य र पश्चितका पहाडी जिल्लाहरूमा बसाई सरी काठमाडौँको काठ क्षेत्रमा छरिएर बस्न थाले । शिवपुरी डाँडा आशपासमा पनि रहे । त्यहि क्षेत्रमा मात्र दुलालहरु सिमित रहेनन् । सिमाना पारि भारतको सिक्किम पश्चिम बङ्गाल, आसाम, म्यानमार, भुटानसम्म फैलिए फेरि तराईतिर बिस्तार हुदै आएको देखिन्छ ।
आज देशविदेश गरी तीन लाख संख्याको हाराहारीमा दुलालको जनसङ्ख्या देखिन्छ । यो जनसङ्ख्या विस्तारको सामान्य प्रकृया हो ।
दुल्लुका शाह शाहीहरु कहिले काभ्रेपलाञ्चोक आए या वत्सराजले अपुङंगी राज्य चलाए । या पछि मात्रै गुणदेवहरु काभ्रेपलाञ्चोक आए भन्ने तिथि मिति सहि आधार प्रमाणहरु भेटीएनन् । कुन मितिमा गुणदेवका छोराहरूलाई सदाशिवामल्लले ताम्रपत्र दरिदिएको हो भन्ने राणाकालिन फैसलामा पनि खुलेन । खाली दुलालको विर्ता २ भनी राणाकालीन फैसला पछाडीपट्टी संग्लग्न राखेका छौ । श्रृति प्रमाणलाई आधार मान्दा आजभन्दा २०‌औ पुस्ता पहिले काभ्रेपलाञ्चोक देउपुर बाख्रेगौडा नगरकोट बिर्ता पाएका थिए । त्यसपछि १९१८ मा काभ्रे देउपुर मुलविर्ता थप ताम्रपत्र १८९१ मा यिनै जगन्नाथका जेठा सन्तान पट्टिकाले ४ भाईको दोलखा काटाकुटी पाएको आधार छ र विर्ताको बारेमा अन्य पेजमा ब्याख्या भएकै छन् । हाम्रा थाकथलोका प्रमाणित इतिहास यिनै हुन् ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=दुलाल&oldid=1035130" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०१:३२, १५ सेप्टेम्बर २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।